मुसहर बस्तीमा धुर्मुस-सुन्तलीले यसरी मनाए होली - GorkhaliSite
Home > मनोरंजन > मुसहर बस्तीमा धुर्मुस-सुन्तलीले यसरी मनाए होली
मुसहर बस्तीमा धुर्मुस-सुन्तलीले यसरी मनाए होली
March 2, 2018 admin10
रौतहट — चन्द्रपुर-८ स्थित मुसहर बस्तीमा शुक्रबार कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र पत्नी कुन्जना घिमिरे (सुन्तली) ले होरी मनाए । उनीहरुलाई स्वागत गर्न बस्तीका मानिसहरु थरीथरीका रंग लिएर बसेका थिए । धुर्मुस-सुन्तली होली खेल्न आउने भएपछि मुसहरहरु मख्ख थिए । बस्तीमा खुशीको छुट्टै महोल थियो । अपरान्ह दुवै आए । बस्ती प्रवेश गर्नासाथ रंगीविरंगी रंगले स्वागत उनीहरुलाई गरे ।
धुर्मुस-सुन्तली पहिले मुसहरका घर/घर पुगे । दुवैलाई फागुले रंगाई दिए । उनीहरुलाई अंगालो मारेर माया नगर्ने कुनै मुसहर थिएनन् । बस्तीका मानिस आनन्दको अनभूति गर्थे । मानिसको भीड निकै थियो । बस्ती हेर्न आउनेहरु सेल्फी लिन तँछाडमछाड गर्न थाले । पहिलोपटक भव्यताका साथ होली मनाइएको स्थानीय सन्तनारायण माझी (मुसहर) ले बताए ।
‘जीवनमा सबैभन्दा ठुलो खुशी आज भएको छ,’ उनले भने,‘धुर्मुस-सुन्तली मुसहर समुदायमा आइ होली खेलेर दलितको मनोबल उच्च भएको छ । जति प्रसंशा गरे पनि कम हुन्छ ।’
उनीहरुले दुवैलाई भगवानको संज्ञा दिए । अघिल्ला वर्षहरुमा यो बस्तीमा होली र अन्य पर्वमा मदिरा सेवन गरी झगडा गर्थे । कुटाकुट हुन्थ्यो । तर अहिले परिवेश बदलिएको छ । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले बनाई दिएको नमुना बस्तीमा एक आपसमा भाइचाराको सम्बन्ध प्रगाढ भएको छ । त्यहाँ कसैले मदिरा सेवन गर्दैनन् ।
फागुले रंगेपछि दुवै नाच्न व्यब्यस्त भए । ‘कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु…’ गीत बजाएपछि धुमुर्स-सुन्तलीसँग मुसहर बस्तीका महिला/पुरुष सबै नाच्न थाले । मुसहरहरु यसरी पहिलो पटक नाचेको देख्दा स्थानीय छक्क परे । गीतसँगै माहोल निकै रोमाञ्चक बन्यो । नाच्दै गरेका धुर्मुस बेला/बेलामा बाहिर निस्कन्थे ।
सुन्तली भने कम्मर भाँचीभाँची नाचेर मुसहर महिलालाई अपनत्वको झझल्को दिलाउन कोशिस गर्थिन् । घर/घरबाट मुसहर महिलाहरु नाच्न निस्केका थिए । बालबालिका पहिलेदेखप नाचिरहेका थिए । नृत्यसँगै सेल्फी लिने गर्थे । धुमुर्स सुन्तलीले सबैलाई हात समातेर नचाए ।
तपाईं कुन बेला जन्मनु भो हेर्नुहोस् आफ्नो भाग्य-स्वभाव…..
तरकारीवाली पनि फिल्मको पोस्टरमा !!
February 16, 2018 Nepal qatar
म २० वर्षकी भएँ, मैले आफ्नो केटासाथीसँग धेरै पटक यौनसम्बन्ध राखेकी थिएँ ।
विवादित गायिका सरस्वती लामा भन्छिन्ः ‘लुगा लाउने नलाउने मेरो हक
February 14, 2018 Nepal qatar
नेपाल आइडल बुद्ध लामाले कार चलाउन नपाएको भन्दै गरेको गुनासोको अडियो भाइरल, एपीवान यसो भन्छ
March 9, 2018 admin Comments Off on नेपाल आइडल बुद्ध लामाले कार चलाउन नपाएको भन्दै गरेको गुनासोको अडियो भाइरल, एपीवान यसो भन्छ
सुगर रोगबाट पिडितलाई खुसीको खबर ! यसरी प्राकृतिक जटिबुटी बाटै केही दिनमै चट पार्ने काईदाको टिप्स सहित बिधिबारे जानकारी लिनुहोस
March 9, 2018 admin Comments Off on सुगर रोगबाट पिडितलाई खुसीको खबर ! यसरी प्राकृतिक जटिबुटी बाटै केही दिनमै चट पार्ने काईदाको टिप्स सहित बिधिबारे जानकारी लिनुहोस
ओलीले राष्ट्रपतिमा विद्याको नाम लिएपछि झलनाथले भने– पार्टी तपाईंको घर हो
March 9, 2018 admin Comments Off on ओलीले राष्ट्रपतिमा विद्याको नाम लिएपछि झलनाथले भने– पार्टी तपाईंको घर हो
March 8, 2018 admin Comments Off on पोखरामा सुरु भयो उड्ने ट्याक्सि ! कति लाग्छ भाडा? विस्तृत जानकारीको लागी भिडियो हेर्नुहोस
यि हुन् उडिरहेको प्लेनमै उपचार गरि विदेशीको ज्यान बचाउने नेपाली युवा डाक्टर ।
March 8, 2018 admin Comments Off on यि हुन् उडिरहेको प्लेनमै उपचार गरि विदेशीको ज्यान बचाउने नेपाली युवा डाक्टर ।
आजको राशिफल वि.सं. २०७४ फाल्गुन २५ गते शुक्रबार ई.… (364)
भखरै डक्टरले यस्तो भनेपछि भरतपुर अस्पतालमै एक… (274)
दोस्रो विवाह गर्नेलाई सरकारद्वारा घर उपहार दिने… (270)
प्लेन भित्रै एक बंगलादेशीले हस्तमैथुन गरेपछि… (243)
केहीदिन अघि आफूले अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेको… (224)
सुत्नुभन्दा पहिला उमालेर खानुस् केरा, केहि दिनमै… (220)
२०७५ सालका लागि दशैँ तिहार देखी सार्वजनिक बिदाहरुको… (206)
बागलुङ कालिकाको यस्तो शक्ति ! किशोरीहरुलाई… (180)
Gorkhali Site All Right Reserved